Akhriso Howlgalo Dhimasho Iyo Dhaawac Ay Ku Noqdeen Askar Yugandheys Iyo Soomaali. – Calamada.com
Akhriso Howlgalo Dhimasho Iyo Dhaawac Ay Ku Noqdeen Askar Yugandheys Iyo Soomaali.
calamada November 23, 2021 1 min read
Howlgalo isugu jira weeraro toos ah iyo qaraxyo waxey saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhaceen deegaano ka kala tirsan wilaayaatka Baay iyo Shabeelada hoose.
Dhanka gobalka Baay gaar ahaan duleedka baydhabo waxey ciidamada Mujaahidiintu saaka dagaal kula wareegeen gacan ku heynta deegaanka daynuunaay waxeyna dagaalkaas mujaahidiintu ku dhaawaceen saddex askari oo murtadiin ah.
Isla duleedka magaalada Baydhabo waxey Mujaahidiintu kamiin u dhigeen maleeshiyata murtadiin ah oo kasoo baxay Baydhabo waxaana kamiinkaas lagu dilay hal askari oo murtad ah labo kale waa lagu dhaawacay.
Dhanka wilaayada Shabeelada hoose waxey ciidamada mujaahidiintu maanta duhurkii qarax la beegsadeen gaari ay la socdeen askarta kufaarta afrikaanta waxa uuna qaraxan ka dhacay deegaanka Shalambood waxaa burburay gaariga darawalkii oo ahaa askari yugandheysna waa ku baqtiyay.
Isla Shabeelada hoose waxey ciidamada Mujaahidiintu deegaanka Buufow qarax kula beegsadeen gaari BG-ah oo ay ka buuxeen askarta kufaarta afrikaanta waxaana bas beelay gaariga iyo askartii la socotay marka laga reebo hal askari oo ka badbaaday qaraxaas, Waxaana goobta soo caga dhigatay diyaarad elecobtar ah oo baqtiyada iyo dhaawacyada goobta ka daabushay.
Isla Wilaayada Shabeelada hoose sarkaal labo xidigle ah oo lagu magacaabi jiray Xasan Al-kum ayaa lagu dhaawacay dagaalkii xalay Mujaahidiintu ku qaadeen saldhiga murtadiinta ee deegaanka Awdheegle.
Isla Wilaayada Shabeelada hoose waxaa sii kordhaya khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyay qarax shalay ka dhacay deegaanka Ceelwareegow waxaana qaraxaas lagu dilay hal askari oo Yugandheys ah waxaana lagu dhaawacay labo kale oo isla Yugandha ah.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 18-04-1443-Hijri.
Next: Ku Dhawaad 15 Askari Oo Gaari Kula Rogmaday Galgaduud.